आकासियो अण्डा र मासुको मूल्य, हेर्नुहोस कति बढ्याे? - khull Postआकासियो अण्डा र मासुको मूल्य, हेर्नुहोस कति बढ्याे? - khull Post
आकासियो अण्डा र मासुको मूल्य, हेर्नुहोस कति बढ्याे?
पुरुषोत्तम ढकाल ९ पुष २०७६, बुधबार ०७:५१ 149 Views
काठमाडौँ : ह्याचरी उद्योगीले गरको आन्दोलनलगत्तै बजारमा ब्रोइलरकाे मासुको मूल्य आकासिएको छ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघले पनि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँ बढाएको छ ।
बजारमा ब्रोइलर कुखुरा पर्याप्त नरहेको राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघको भनाइ छ।
माग बढेपछि मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको संघका अध्यक्ष गंगाबहादुर बीसीले बताए। ‘१० दिनको अवधिमा करिब ४० लाख चल्ला मरेका छन्। ह्याचारी व्यवसायीको आन्दोलनले पनि मूल्यमा असर परेको देखिन्छ,’ उनले भने।
ह्याचरी उद्यमीको राष्ट्रिय भेलाले पोल्ट्रीले सेटर मेसिनमा सेट गरिएका ह्याचिङ अण्डा मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।